AI မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူစကင်နာတံခါးကိုထိန်းချုပ်ရေးစနစ်ပေးသွင်းသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်စက်ရုံ - Mapesen
နေအိမ် > > အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူစကင်နာ > AI မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အနီအောက်ရောင်ခြည် Thermal Scanner Door Access Control System
Mapesen supply AI မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူစကင်နာတံခါးကိုဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်မထိတွေ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းအဖျားစစ်ဆေးခြင်းဝတ်ထားမျက်နှာဖုံး, CE FCC RHOS အရည်အချင်းပြည့်မီ3နှစ်အာမခံ။ CCTV ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အရည်အသွေး၊ ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းဖြင့် ၈ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသောကျွန်ုပ်တို့တွင်အမှတ်တံဆိပ်အေးဂျင့်များနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ OEM မိတ်ဖက်များရှိသည်။
၁။ AI မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူစကင်နာတံခါး ၀ င်ရောက်မှုထိန်းချုပ်ရေးစနစ်
ဒီ AI မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အနီအောက်ရောင်ခြည် အပူ Scanner Door Access Control System သည် ၁ စက္ကန့်လျင်မြန်သောတိုင်းတာခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုခံထားသည့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်နှင့်မျက်နှာဖုံးများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်၊ မျက်နှာပြင်ဒေတာဘေ့စ် 50000pcs, 100000pcs တက်ရောက်သူမှတ်တမ်းများ, အချက်ပြအချက်ပြအနီအောက်ရောင်ခြည်အပူဖျားခြင်း± ၀.၃ °ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ ၀ င်ရောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အမျိုးမျိုးနှင့်သဟဇာတဖြစ်ခြင်း။ မြို့လုံခြုံရေးအတွက်ထိထိရောက်ရောက်ထိန်းချုပ်ရန်နှင့်အာမခံရန်အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေအမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
2. AI မျက်နှာ၏အသိအမှတ်ပြုခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူစကင်နာတံခါးကို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးစနစ်၏ကုန်ပစ္စည်း Parameter
8 Inch LCD ပြသရန် Screen
အပူ imaging infrared temperature sensor
Range:5℃-42℃, တိကျစွာ: ± 0.3℃
Focal အရှည် 1.8mm, ကြည့်ရှု၏ Field: 118°
â 120dB â
S / N အချိုး
â¥¥ 46dB (AGC OFF)
Program mode (စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော shutter interval)၊ shutter mode (1/5 - 1 / 20,000s)
နှေးနှေးသော Shutter ကိုထောကျပံ့
အော်တို၊ မိုးလုံလေလုံအပြင်ဘက်၊ ဆိုဒီယမ်ဆီမီးခွက်မုဒ်၊ လက်စွဲ
3D DNR ကိုထောက်ပံ့သည်
H.265 ပင်မကိုယ်ရေးအချက်အလက် / H.264 အဆင့်မြင့် / M-JPEG
output ကို Bit နှုန်း
(CBR သို့မဟုတ် VBR), Bitstream setting ကိုအကွာအဝေး:32Kbps ~ 10Mbps
1ch10 / 100BaseT Ethernet RJ45 interface ကို
relay output 1ch
50000pcs မျက်နှာဒေတာဘေ့စ်သိုလှောင်ရန်အတွက်ထည့်သွင်းထားသော 16G SD ကဒ်
built-in 2ch အသံ output ကို
1.5KG (bracket ကနှင့်အတူ)
3. Product Feature And Application ofအာအိုင် Face Recognition Body အပူချိန် Infrared အပူ Scanner Door Access Control System
- 8 Inch HD LCD ပြသရန် Screen.
- Non-contact Body အပူချိန် Measurement 35℃-42℃
- မြင့်မားသောတိကျမှုအထိ၊ ၀.၃ â±။
- Face Recognition၊ 50000pcs မျက်နှာဒေတာဘေ့စ်၊ 10000pcs မှတ်တမ်း။
- Local Alarm Output if Abnormal အပူချိန် Detected.
- Access Control စနစ်၊ Access Control System အမျိုးအစားအားလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
- Third-Party Platform Docking ။
- Can Record Identification Information and အပူချိန် Information for Future Search.
၎င်းသည်လူများ၏ ၀ င်ထွက်မှုနှင့်ထွက်ခွာမှု၏ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိထိရောက်ရောက်ထောက်လှမ်းနိုင်ပြီးကပ်ရောဂါအခြေအနေကိုကာကွယ်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။ ၎င်းကိုအရံတန်းများ၊ အများပြည်သူနေရာဂိတ်များသို့မဟုတ်လူအများစီးဆင်းမှုရှိသောအခြားထိန်းချုပ်ထားသည့်ဝင်ပေါက်များသို့မဟုတ်areasရိယာများ၊ လက်စွဲစာအုပ်အလုပ်များအစားခက်ခဲသောစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အထူးအချိန်ကာလအတွင်းကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
5. Product Qualification ofအာအိုင် Face Recognition Body အပူချိန် Infrared အပူ Scanner Door Access Control System
Over 8 years’ experience in manufacturing CCTV products,Mapesen are with strictly quality control system to ensure every delivered products performing well and passed ISO9001. For all production,our QC and IQC department will inspect and control all of the procedures from the income materials to the finish products,and ensure 100% aging until the quality is meeting the requirement.Our AI Face Recognition အပူ Scanner Door Access Control System is all CE,FCC,RHoS qualified,and obtained high praise from customers.
ဟုတ်ပါတယ်၊ acces control system အမျိုးမျိုးနဲ့သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။
Face ID အချက်အလက်အစုသည်မျက်နှာဒေတာဘေ့စ်သို့မည်သို့တင်သွင်းမည်နည်း။
hot Tags:: AI မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူစကင်နာတံခါးကိုဝင်ရောက်ခွင့်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းသူ, စက်ရုံ, တရုတ်, လက်ကား, ဝယ်, စိတ်ကြိုက်, စတော့ရှယ်ယာ, Bulk, စျေးပေါ, လျှော့စျေး, စျေးနိမ့်, CE, စျေးနှုန်း, အဆင့်မြင့်, အရည်အသွေး